Huawei Watch GT 2: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Miaraka amin'ny fanolorana ny Mate 30, ny marika sinoa dia nandao antsika omaly niaraka tamin'ny zava-baovao iray hafa tamin'ny vokatra vokariny. Ny smartwatch vaovao dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity hetsika tany Alemana ity. Momba ny Huawei Watch GT 2 io, izay taranaka faharoa amin'ity modely ity, taorian'ny vokatra tsara tamin'ny herintaona tamin'ny voalohany, izay mihoatra ny 10 tapitrisa ny varony.
Andro vitsy lasa izay, talohan'ny fampisehoana, ny antsipiriany voalohany momba ity famantaranandro ity dia efa navoaka, toy ny volavolanao. Ary farany, tamin'ity hetsika tany Munich ity, ny marika dia nanolotra an'ity Huawei Watch GT 2. Famantaranandro feno ity, izany dia miaraka amina andiam-panatsarana hanomezana fampisehoana farany ambony.
Ny endrika dia tsy nitahiry zava-miafina be loatra ho anay, taorian'ny famoahana tamin'ity herinandro ity. Ny marika sinoa dia manolo-tena amin'ny endrika kanto sy milamina, saingy mahatohitra tsara izany rehefa milalao fanatanjahan-tena. Izy io dia manana chassis metaly somary manify, izay mahatonga azy io ho famantaranandro maivana koa amin'ny fotoana rehetra. Ny vera 3D boribory misy sisiny miolaka no ampiasaina, manome fampiasana milamina kokoa.
Huawei Mate 30 sy Mate 30 Pro: ny farany avo lenta an'ny marika
Ary koa, ireo zana-kazo amin'ity Huawei Watch GT 2 ity dia voafono ihany. Nihaona taminay bokotra roa amin'ny ilany ankavanana amin'ny famantaranandro. Maka tahaka ny satro-boninahitry ny famantaranandro mahazatra izy ireo. Hita mazava izy ireo ary ny fampiasana azy dia mora be amin'ny fotoana rehetra. Miaraka amin'izy ireo isika dia afaka mivezivezy amin'ny interface na miditra amina lahasa sasany.
3 Vidiny sy fandefasana
Ny famantaranandro dia natomboka tamin'ny habe roa teny an-tsena, miaraka amina dial 46 milimetatra ary maodely iray hafa misy dial 42 milimetatra. Na dia ny angona rehetra nozarain'ny mpanamboatra aza dia manondro ilay maodely lehibe kokoa. Satria tonga miaraka amin'ity Huawei Watch GT 2 ity efijery 1,39 santimetatra ny habeny. Namboarina tamina tontonana AMOLED izy ary manana vahaolana 454 x 454 teboka. Izy io dia vahaolana avo kokoa noho ny mpifaninana maro.
Ao anaty famantaranandro dia misy Chip Kirin A1 miandry antsika. Ity dia processeur vaovao avy amin'ny mpanamboatra, izay efa hitantsika tao amin'ny FreeBuds tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Ity processeur ity dia manana fitaovana fikirakirana Bluetooth efa mandroso, singa fanodinana feo hafa ary miavaka indrindra noho ny fanjifana herinaratra ambany ao aminy. Azo atao izany noho ny fampiasana Cortex-M7 izay mamela ny fahazoana mihinana angovo voalaza. Nahazo fahombiazana tsara ianao, saingy kely ny fanjifana herinaratra.
Raha ny marina, araka ny nambaran'ny orinasa tamin'ny fampisehoana nataony, Ity Huawei Watch GT 2 ity dia manome fahaleovan-tena hatramin'ny roa herinandro. Ka ny bateria ao dia hanome fahaleovan-tena betsaka ho antsika. Raha te hampiasa tsy tapaka ny fandrefesana GPS isika dia hanome antsika fampiasana hatramin'ny 30 ora, amin'ny maodely 46 mm. Na dia miankina amin'ny fampiasana antsika amin'ny famantaranandro aza ny fihinanana bateria.
Misy ihany koa fanatsarana miavaka amin'ny fitahirizana ny famantaranandro, izay manana fahaiza-manao bebe kokoa. Araka ny nolazain'ny orinasa tamin'ny famelabelarana azy dia manome antsika ity Huawei Watch GT 2 ity toerana hitahirizana hira hatramin'ny 500 tsy misy olana. Ny mozika ankafizinay dia misy foana amin'ny fotoana rehetra.
Ny Huawei Watch GT 2 dia famantaranandro fanatanjahan-tena. Manana ny fahaizana mamantatra sy mandrefy fanatanjahantena 15 samihafa izy io tsy misy olana. Ny fanatanjahan-tena hitantsika ao dia: mihazakazaka, mandeha an-tongotra, mananika, mihazakazaka an-tendrombohitra, mandeha bisikileta, milomano rano misokatra, triathlon, bisikileta, milomano amin'ny dobo filomanosana, fampiofanana maimaim-poana, milina elliptical sy rows, na fanatanjahantena anaty sy ivelany no misy ao aminy, noho izany .
Ny iray amin'ireo tombony lehibe azo avy amin'izany dia ny fampiasana azy amin'ny filomanosana, amin'ny karazan-drano rehetra. Ny famantaranandro dia voamarina IP68, izay mahatonga azy tsy ho tantera-drano. Azontsika atao ny milentika azy hatramin'ny 50 metatra, araka ny hita amin'ny fampisehoana azy, ka mahatonga azy io ho tsara ampiasaina raha manao spaoro. Hanohy handrefy ny asantsika amin'ny fotoana rehetra izany.
Noho izany, miaraka amin'ity Huawei Watch GT 2 ity isika dia afaka manao mifehy tsara ny asantsika amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia handrefesana ny tahan'ny fo, ny dingana vita, ny elanelana lavitra, ny kaloria may, ankoatry ny fandrefesana ny haavon'ny adin'ireo mpampiasa. Ho fanampin'ny asany ara-panatanjahantena, manome antsika maro hafa ny famataranandro. Satria afaka mahazo fampandrenesana ao isika, mandray antso, mihaino mozika amin'ny fotoana rehetra, hahafahantsika mampiasa azy amin'ny karazana toe-javatra tsy misy olana.
Tamin'ny famelabelarana omaly, nanamafy ny orinasa fa handeha ity Huawei Watch GT 2 ity hanomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana oktobra eo amin'ny tsena eropeana. Mampalahelo fa tsy manana daty voafaritra izahay, fa azo antoka fa hanambara tsy ho ela ny marika amin'ny andro manokana izay hamarotana ity smartwatch vaovao ity. Tsy tokony ho ela loatra.
Ny ananantsika dia ny vidin'ny kinova roa an'io. Ny maodely 42 mm dia havoaka amin'ny vidiny 229 euro eny an-tsena. Amin'ny tranga maniry ny maodely 46 mm, tsy maintsy mandoa vola 249 euro ianao amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Watch GT 2: Smartwatch vaovao an'ny marika
Google Maps amin'ny Android dia efa nandramana ny fomba fanamoriana
Ny variant amin'ny Snapdragon 855 Plus an'ny Redmi K20 Pro dia ofisialy izao